오늘0전체 629,526
미얀마 버마 緬甸 Myanmar Burma
မန္တလေး အပါအဝင် မြို့ခြောက်မြို့တွင် ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်မည် | 미얀마 버마 緬甸 Myanmar Burma
Mandalaywith 2013. 10. 28. 23:21
ပြည်တွင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အဆင့်မြင့် ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်း ခြောက်ခုကို မန္တလေးမြို့တော် အပါအဝင် မြို့ကြီးများ၌ တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ရေအရင်းမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းလွင်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယင်းဆိပ်ကမ်းများအနက် မန္တလေးမြို့တော် ဆိပ်ကမ်းမြေနေရာမှာ လျာထားပြီးဖြစ်ကာ မြေဧရိယာ ၃၁ ဒသမ ၃၉ ဧကတွင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် စတင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက ပြောကြားသည်။
မန္တလေးမြို့တော်တွင် တည်ဆောက်မည့် အဆင့်မြင့် ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်း ပြီးစီးပါက တစ်နှစ်လျှင် ယေဘုယျ ကုန်စည် တန်ခြောက်သိန်း၊ ထုထည် ကုန်စည်နှင့် အရည်ကုန်စည် တန်ချိန် တစ်သန်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းစီမံကိန်းအတွက် လူမှုစစ်တမ်းနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း ကောက်ယူနေသည့် Royal Tree Services တာဝန်ရှိသူ ဦးတင်အောင်မိုးက ရှင်းပြသည်။
မန္တလေးမြို့တော်တွင် ဆောက်လုပ်မည့် ဆိပ်ကမ်း မြေနေရာသည် ဒေသခံတောင်သူ ခုနစ်ဦးနှင့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးတို့ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယင်းစီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်ပါက သင့်လျော်သော မြေယာ လျော်ကြေးကို ပေးမည်ဖြစ်ကာ မတန်တဆ လျော်ကြေးများပေးရန် အစီအစဉ် မရှိကြောင်း ဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းက တောင်သူတစ်ဦး၏ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားသည်။
ဆိပ်ကမ်း ဆောက်လုပ်ရန် လျာထားသည့် မြေ ၃၁ ဒသမ ၃၉ဧကတွင် ဂရိတ်ဝေါ ကုမ္ပဏီက ဧက ၂၀ ကျော် ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကုမ္ပဏီပိုင် ဆိပ်ကမ်း ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် တောင်သူများထံမှ ဝယ်ယူထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဂရိတ်ဝေါ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင် ဦးတင်မောင်က ပြောကြားသည်။
“အဆင့်မြင့် ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်မယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။ ကုန်စည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရာမှာလည်း မြန်ဆန်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု မန္တလေးမြို့မှ ဗန်းမော်သို့ ရေကြောင်းဖြင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးက မှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုသည်။
ပြည်တွင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဆင့်မြင့် ကွန်တိန်နာ ဆိပ်ကမ်းတည် ဆောက်ရာတွင် ဧရာဝတီမြစ် အခြေပြုဖြစ်သည့် မန္တလေး၊ ဗန်းမော်၊ မြင်းခြံ၊ ပခုက္ကူမြို့နှင့် ချင်းတွင်းမြစ် အခြေပြုသည့် မုံရွာ၊ ကလေးဝမြို့တို့၌ တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးထွန်းလွင်ဦးက ပြောကြားသည်။
by The Voice Weekly Journal
◀ 이전 1234567 8910 ··· 61 다음 ▶